Global Voices teny Malagasy » Global Voices, Mpiaramiasa Amin’ny Taona Iraisampirenena ho an’ny Tenin’ny Teratany – IYIL 2019 – · Global Voices teny Malagasy » Print
Global Voices, Mpiaramiasa Amin'ny Taona Iraisampirenena ho an'ny Tenin'ny Teratany – IYIL 2019 -
Voadika ny 17 Janoary 2019 6:45 GMT 1	 · Mpanoratra Eddie Avila Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Mediam-bahoaka, Blaogim-Piarahamonina GV, Rising Voices
Nambaran'ny Firenena Mikambana ho Taona Iraisam-pirenena ho an'ny Tenin'ireo Teratany  ny taona 2019.
Mahafaly ahy ny milaza aminareo fa ny Global Voices dia nasaina mba ho lasa mpiara-miasa ofisialy amin'ity fanentanana herintaona ity. Ny Rising Voices (RV)  no handamina ny fandraisanay anjara amin'ny alalan'ny fiarahana miasa amin'ireo tariky ny zanatsampana isan-karazany, ny faritra sy ny fiteny. Araka izay efa fantatrareo, ny RV dia miasa efa an-taona maro mikasika ny fikatrohana nomerika ho an'ny fiteny sy ny fomba mety haha-fitaovana ny teknolojia ho an'ireo vondrom-piarahamonina miasa mba hanomezana aina vao ny teny.
Ny faran'ny volana Janoary no hatomboka ny fanentanana ofisialy, ao amin'ny foiben'ny UNESCO ao Parisy. I Gwen Lefeuvre  mpiara-miasa aminay no hanatrika hisolo tena ny RV mba handrakotra ny zava-misy eo amin'ny kaonty Twitter-ny. Izy no mpanohana lehibe dia lehibe tamin'io asa io ary ankasitrahako ny maha-any azy. Mpikambana hafa iray ato anatin'ny tambajotran'ny tenintsika amin'ny aterineto, Juan Carlos Romero, hisolo tena ihany koa ny RV, amin'ny alalan'ny fandraisana anjara ao anaty adihevitra mikasika ny fikatrohana dizitaly ho an'ny fiteny. Monina ao Parisy amin'izao fotoana izao, tenindreniny ny fiteny Quechua ary mpampianatra izany izy, izay nanampy tamin'ny fiarahana namolavola ny iray tamin'ireo sehatrasanay mikasika ny fiteny teto Cochabamba, Bolivia .
Ahoana no hahafahanao mandray anjara?
Amin'ny fiandohan'ny taona ho avy, handefa ny taratasim-pifandraisanay manokana ny RV amina endrika Netizen Report mifantoka amin'ny teknolojia sy ny fanomezana aina indray ireo fiteny. Raha maniry ny handray anjara ianao amin'ny fizaràna an'ireo rohy na amin'ny fanoratana andalana fohy mikasika io lohahevitra io, manambatra tarika iray izahay ho an'ireo maniry ny handray anjara amin'io. Azafady, ampahafantaro aho.
Manorata na mandikà ireo lahatsoratra amin'ireo fiteny teratany manerana izao tontolo izao (miaraka na tsia amn'ny zoro teknolojika). Marobe ireo zoro isankarazany azo trandrahana ary maro aminareo no tsara toerana manokana amin'ny fahafantarana ny anjara toeran'ireny fiteny ireny, ao amin'ny firenenao ihany. Resaho amin'ny tonianao ireo safidinao, amin'ny tomponandraikitry ny tranonkala na amiko ihany koa. Anisany manana lahatsoratra betsaka nefa tsy maika izahay ao anaty tahirinay  izay iriana bebe kokoa ny fandikàna azy
Avereno bitsihana sy zaraina ny asanay ho eo amin'ireo fantsona media sosialianao. Ho tena mavitrika izahay eo amin'ny kaonty Twitter @risingvoices  miaraka amin'ny tenifototra # IYIL2019  manomboka amin'ny fiandohan'ny volana janoary. Ho an'ity fanentanana an-tambajotra ity, miaraka miasa akaiky ihany koa izahay amin'ny tarikay ao amin'ireo media sosialy. Ato ho ato, hifandray ihany koa amin'ireo faritra sy vondrona samihafa miasa momba ny teny izahay, izay mitantana ny fantsona media sosialy azy ireo manokana mba hisian'ny fifandrindràna akaiky kokoa.
Misokatra amin'ireo hevitra vaovao! Tiako ny haheno ny avy any aminareo.
Fanampin'izay, miaraka amin'ny fanampian'i Jer, manantena izahay ny hanavao isanandro ny vavahadin-tseraseran'ny Activismo Lenguas  (Fiteny) anay izay mametraka anaty sarintany reo tetikasa fikatrohana nomerika isankarazany momba ny fiteny maro manerna an'i Amerika Latina. Aingam-panahy nateraky ny fihodinan'ny kaonty GV Instagram, hifandimby hitantana ny kaonty Twitter natokana ho an'ireo fitenin'ny teratany ao amin'ny faritra ny tambajotranay misy ireo mpikatroka dizitaly ho an'ny fiteny ao Amerika Latina.
Misaotra amin'ny fanohanana sy ny fahalinanareo. Iray amin'ireo antony lehibe izay nanekenay ny fanasàna ho lasa mpiaramiasa dia takatry ny vondrom-piarahamoninay ny tanjaka sy ny maha zava-dehibe ny fitantaraàna ireo tantara ary ny fahazoana vaovao sy torohay amina fiteny isankarazany manerana ny tany mba hampitomboana ny fahaizana ny fifanakalozana ara-kolontsaina. Toerana tokana no misy anay mba hanehoana ny asanay amin'izao fotoana, ary koa ireo azo atao amin'izay antenain'ity fanentanana ataon'ny Firenena Mikambana ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/01/17/132732/
 Taona Iraisam-pirenena ho an'ny Tenin'ireo Teratany: https://en.iyil2019.org/
 Rising Voices (RV): https://rising.globalvoices.org
 Gwen Lefeuvre: https://community.globalvoices.org/2017/08/meet-gwenaelle-the-physicist-who-fell-in-love-with-minority-languages/
 iray tamin'ireo sehatrasanay mikasika ny fiteny teto Cochabamba, Bolivia: https://rising.globalvoices.org/blog/2017/03/15/digital-activists-meet-up-offline-to-promote-bolivias-language-diversity-online/
 # IYIL2019: https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://twitter.com/search%3Ff%3Dtweets%26vertical%3Ddefault%26q%3D%2523IYIL2019%26src%3Dtypd&xid=17259,1500003,15700022,15700124,15700186,15700191,15700201,15700237,15700248&usg=ALkJrhhJ0HSpU4qrPar0nfWDg039wQSDIw